Rotterdam Hague ilaa Milan Bergamo duulimaadyada Transavia hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Rotterdam Hague ilaa Milan Bergamo duulimaadyada Transavia hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Italy War Deg Deg Ah • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada ka socda Rotterdam Hague ilaa Milan Bergamo ee Transavia hadda
Bilaabidda adeeg saddex-ilaa afar jeer toddobaadle ah oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Netherlands xagaaga soo socda, sidaha qaaliga ah ee Dutch-ka ayaa si weyn u kordhin doona khariidadda waddada Milan Bergamo ee waqooyi-galbeed Yurub.
Transavia waxay ka bilaabaysaa isku xirka Rotterdam The Hague Airport oo ka timaada Milan Bergamo Airport.
Rotterdam waa xarun weyn oo xagga saadka iyo dhaqaalaha ah waana mid muhiim u ah shabakadda Milan Bergamo.
Si lammaanaha cusub ee duulimaadku u aqoonsado suurtagalnimada suuqa waa calaamad xusid mudan awoodda Lombardy iyo baahida sii kordhaysa.
Madaarka Milan Bergamo ayaa ku dhawaaqay bilowga xiriirkii Transavia ee Rotterdam The Hague, taasoo calaamad u ah in lagu daray diyaaraddii saddexaad ee cusub oo lagu daray albaabka Lombardy bilihii la soo dhaafay. Bilaabidda adeeg saddex-ilaa afar jeer toddobaadle ah magaalada labaad ee ugu weyn Nederland xagaaga soo socda, sidaha qiimaha jaban ee Nederland ayaa si weyn u kordhin doona Milan Bergamokhariidada waddada waqooyi-galbeed ee Yurub.
Giacomo Cattaneo, oo ah Agaasimaha Duulista Ganacsiga, SACBO ayaa leh: “Hoyga dekadda ugu weyn Yurub, Rotterdam waa xarun weyn oo xagga logistikada iyo dhaqaalaha ah waana mid muhiim u ah shabakadeena. Si lammaane cusub oo diyaaradeed loo aqoonsado suurtagalnimada suuqa waa calaamad xusid mudan awoodda Lombardy iyo baahida sii kordheysa. ”
Ku biirista adeegga la aasaasay ee Milan Bergamo ee Eindhoven, bilowga xiriirka Transavia ee Rotterdam ayaa siin doonta shirkadda Air France-KLM qayb 30% ah oo ah shabakadda garoonka Dutch-ka. Hadda oo bixineysa ku dhawaad ​​300 duulimaad oo Nederland xagaaga soo socda, gobolka Lombardy wuxuu yeelan doonaa xiriir muhiim ah dhaqaalaha toddobaad ee ugu weyn Yurub ee GDP.
Marcel de Nooijer, Transavia Maamulaha guud, ayaa leh: “Waxaan ku kalsoonahay inaan sugeyno xagaaga 2022 waana ku faraxsanahay ku darista xiriirkeena cusub ee Milan Bergamo. Tani waxay noo saamaxaysaa inaan sii wadno inaan ka jawaabno rabitaanka rakaabkayaga ee doonaya inay ogaadaan meelaha cusub. Xagaagan waxaan aragnay in Nederland ay aad u xiiseyneyso inay mar kale safraan, tusaale fasax ama booqasho qoys. Waxaan aragnaa in ballansashada xilliga dayrta ay soo baxayso waxaan kaloo leenahay rajooyin aad u sarreeya jiilaalka. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno dardar -gelintan illaa xagaaga 2022. ”
Rotterdam Madaarka Hague (oo hore u ahaan jiray Madaarka Rotterdam, Vliegveld Zestienhoven oo Dutch ah), waa garoon yar oo caalami ah oo u adeega Rotterdam, magaalada labaad ee ugu weyn Netherlands iyo The Hague, caasimadeeda maamulka iyo boqortooyada. Waxay ku taal 3 NM (5.6 km; 3.5 mi) waqooyi -galbeed ee Rotterdam ee Koonfurta Holland waana garoonka saddexaad ee ugu mashquulka badan Netherlands.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Orio al Serio, ku suntan sida Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo, waa garoonka saddexaad ee ugu mashquulka badan gegida dayuuradaha ee Talyaaniga. Waxay ku taal dhulka dawladda hoose ee Orio al Serio, 3.7 km koonfur -bari Bergamo ee Talyaaniga.